လူ့ဘဝ သက်တမ်း ရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ကို စာသင်ခန်းထဲ မှာ ကုန်ဆုံး ခဲ့ရပေမယ့် ဘဝအာမခံချက် မရခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ပညာရေး – Let Pan Daily
ကျွန်တော်သာဆိုရင် ပညာရေးစနစ်ကိုပြင်မယ်။ စနစ် ကို လူတွေက မောင်းနှင်တာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် လူတွေကိုပါ ပြင်ပစ်မယ်။
စနစ်မှာ ဘာတွေပြင်မလဲ.. ?
လက်ရှိပညာရေးစနစ်မှာ သင်ရတဲ့စာရဲ့ အဆင့်နဲ့ အချိန်တွေဖြုန်းသလိုဖြစ်နေတယ်။ မနက် ၉ နာရီ ကနေ ညနေ ၄ နာရီ သင်နေရပေမယ့် ထိရောက်မှုမရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဘွဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဘဝသက်တမ်းရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို စာသင်ခန်းထဲမှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ရပေမယ့် ဘဝအာမခံချက် မရခဲ့တာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ဟုတ်ပြီ။ဒါဆို ဘာကို သင်မလဲ.. ?
ဘာသာရပ်တိုင်းမှာ အတွေးအခေါ်ပါအောင် သင်နိုင်ရပါမယ်။
မြန်မာစာသင် တဲ့နေရာမှာ ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်က မြန်မာစာ ကဗျာ ဝတ္ထုတွေကို ဝါသနာပါပြီး လေ့လာတဲ့သူမျိုးတွေကိုသာတာဝန်ပေးသင့်ပါတယ်။ ကဗျာကို အသံနေအသံထားနဲ့ပြောတတ် ဆိုတတ် ငိုတတ် ရပါမယ်။ မြန်မာကဗျာနဲ့ဝတ္ထုကိုသာ ကောင်းကောင်း သင်ပေးနိုင်ရင် လူငယ်တွေ နုညံ့သိမ်မွေ့လာမှာပါ။သင်္ချာသင်ရင်လဲ2+2=4 ကိုကျက်ဖို့ထက် လက်တွေ့ပြပြီး ပေါင်းခြင်းရဲ့ သဘောသဘာဝကို သိအောင် သင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သီအိုရီတွေကို ကျက်ဖို့ထက် လက်တွေ့လုပ်ခြင်းအားဖြင့် တစ်သက်စာ မှတ်မိ သွားတာပါ။
သိပ္ပံလက်တွေ့ခန်းတွေကို သော့ခတ်ထားပြီး H2O ဟာ ရေဖြစ်တယ်ဆိုတာ ကျက်ခိုင်းနေသရွေ့ ပညာရေးက တိုးတက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အထက်တန်းအထိ သမိုင်းမှာ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ကို ကျက်ခိုင်းနေမယ့်အစား စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြောပြ သင်ပြနိုင်ရပါမယ်။ ခုနှစ်သက္ကရာဇ်အတိအကျနဲ့အဖြစ်အပျက်ကို မှတ်ဖို့က တက္ကသိုလ်သုတေသနလုပ်တဲ့သူမှာမှ လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့နေရာမှာ ရေး၊ဖတ်၊ပြော၊နားထောင် လေးဆင့်ရှိပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက ရေးတာနဲ့ ဖတ်တာပဲ အဓိကလုပ်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တမ်းလိုတာက ပြောတာနဲ့ နားထောင်တာ အဓိကခင်ဗျ။ အင်္ဂလိပ်စာသင်တဲ့ဆရာမကိုယ်တိုင် အင်္ဂလိပ်လိုမပြောတော့ ခက်တာပေါ့။ english စာ စာမေးပွဲမှာ နုတ်ဖြေပါထည့်သင့်တယ်
ပညာရေးမှာ အဓိကသင်ရမှာက အတွေး အခေါ်၊ အသိပညာ အတတ်ပညာ နဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရဲ့အနေအထား နဲ့ ခေတ်ရဲ့ အနေအထားအရ အခြေခံပညာကစပြီး သင်ရမယ့် ဘာသာစကားတစ်ခုက တရုတ်ဘာသာစကားနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအကြောင်းပါ။ သူတို့အကြောင်းသိပြီး သူတို့စကားပြောတတ်မှ သူတို့ထက်သာအောင် လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေကိုပြင်ဖို့က ဆရာဆရာမတွေကိုလဲ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးရပါမယ်။
မြန်မာစာသင်မယ့်ဆရာ ဆရာမကို စာရေး ဆရာကြီးတွေက training ပေးရပါမယ်။ အင်္ဂလိပ်စာကို နိုင်ငံခြားသား အကူအညီနဲ့ training ယူရပါမယ်။
အလွတ်ကျက် ပြန်ဖြေစနစ်ကနေ သင် တွေးခေါ် ပြန်ဖြေ စနစ်ကို ပြောင်းမှ တိုးတက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာသင်ချိန်ထဲမှာကလေးတွေ ဝါသနာပါရာ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပညာတွေကိုလဲ အချိန်တစ်ချိန်ပေးပြီး သင်ပေးသင့်ပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက် အခြေခံ လက်သမား ပန်းရံ အုတ်စီဗဟုသုတလိုမျိုး သစ်သားတွေအကြောင်းလိုမျိုး သင် သင့်ပါတယ်။
ပညာရေးမှာ အဓိက သင်ရမှာက အတွေးအခေါ်၊ အသိပညာ အတတ်ပညာ နဲ့ ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်အလုပ် ဝါသနာပါတဲ့ သူတွေအတွက် အခြေခံစက်ချုပ်နည်းတွေကို သင်ရပါမယ်။ ပန်းချီဆရာလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ပန်းချီသင်ပေးရပါမယ်။ဒါတွေက သူတို့အရွယ်မှာ တတ်အောင်သင်ဖို့မလိုပါဘူး။ သိရင်ရပါပြီ။ ဒါတွေကို သင်ပြရင်း သူတို့ဝါသနာပါရာကိုလဲ ရွေးထုတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆေးကုသတာ ဝါသနာမပါပဲ ဆေးကျောင်းရောက်သွားရင် ဆရာဝန်မဖြစ်ပဲ အဆိုတော်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ နိုင်ငံတော်က ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးပါတယ်။
ကာယချိန် မှာ မြက်နုတ်ခိုင်းနေသရွေ့ ကျောင်း မှာ ကစားကွင်းမရှိသရွေ့ မြန်မာ့အားကစား ကမ္ဘာကိုမလွှမ်းနိုင်ပါဘူး။
ယနေ့ နာမည်ကြီးနေတဲ့ sex education နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြောရရင် သင်ပေးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ သင်ရိုးထဲမထည့်ပဲ ဗဟုသုတအနေနဲ့အချိန်တစ်ချိန်ပေးကာသင်ရပါမယ်။ ယောက်ျားလေး ကို အမျိုးသားဆရာ မိန်းကလေးကို အမျိုးသမီးဆရာမ သီးသန့်နေရာခွဲကာ သင်ပေးသင့် ပါတယ် ။ သင်တဲ့နေရာမှာ ဆရာဆရာမ ရဲ့ လိမ္မာပါးနပ်မှုရှိဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
ကဲပြောတာလဲများသွားပြီ ဆိုတော့ နောက်နေ့မှ ဆက်ပြောကြတာပေါ့ဗျာ။
စဈသား မိနျးမတဈယောကျ ပွောပွတဲ့ တပျတှငျး ကွုံတှနေ့ရေ တဲ့ အခွအေနေ
ရှတေ့နျး တိုကျစဈ မှုး အထူးကု ဆရာဝနျမကွီး တယောကျ ရဲ့ အကူ အညီ တောငျးခံခွငျး